Ukuhlobisa uBomi baKho ngeZithambiso zeoyile eziNxilisayo China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lo shishino:Manufacturer IMakethe: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Ngaphandle:61% - 70% ICredit:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Inkcazo:Isithambisi sehuni,Umthengisi weenkuni zokwenyani,I-Mini Diffuser 100ml
Home > Imveliso > I-Wood Diffuser > Ukuhlobisa uBomi baKho ngeZithambiso zeoyile eziNxilisayo
Ukuhlobisa uBomi baKho ngeZithambiso zeoyile eziNxilisayo
Umzekelo No.: DT-1503T
Iseti yezipho ze-Aromatherpy-Igqibelele kumagumbi amancinci aneleyo njengegumbi lokulala, iofisi, indawo yokutyela, ukudala indawo enamanzi amnandi nawaphi na amagumbi anolu lusu lusebenzayo olusebenzisa ivumba elimnandi.
I-Ultrasonic Mist flow - I-humidifier ye-Ultrifier yenza ukungalungisi okupholileyo ngokusebenzisa imibhobho ye-ultrasonic yokuhambisa iioyile ezifanelekileyo emoyeni. Hlela imeko yeholide kunye neefestile zokutshintsha.
I-Carefree Soothing Ambiance-Uyilo olungelolize kunye nokuseta okulula kwenza i-ultrusususus lula ukuthatha kunye nawe xa useluhambeni. Khetha iioyile zakho eziyimfuneko kunye namava okuba ivumba lendalo linokutshintsha njani kwimvakalelo kwaye livuselele indawo yakho.
I-Shut-off-isina-Amanzi-xa amanzi egcina amanzi, xa yonke indawo yokugcina amanzi ingena ukusebenza kungekuphela impazamo kodwa nokukhanya ngaphandle kwesandi.
Ukhuseleko & iwaranti- Ngale Bus-free ye-oyile engafaniyo, unokuvuna izibonelelo ze-aromatherapy, ngaphandle komngcipheko wokutsha, i-wax spill, okanye ezinye iingozi. I-CE, i-FCC, ukuvunywa koKhuseleko kwe-RoHS kwaye ithembisa unyaka omnye iwaranti.
I-Amazon Jasmine eNyanisile ye-oyile yeHlabathi yeHlabathi yeDisco
Amandla aphakamileyo eAmazon 500ml iitanki zamanzi zeTanki yeTanki
Umthengisi weenkuni zokwenyani
I-Mini Diffuser 100ml
Isithambisi seOfisi Mini